(Dhagayso) Xildhibaan Maxamed Weeroow oo sheegay in dadwaynaha Gaalkacyo ay si diiran usoo dhaweeyeen qorshaha dawladda Puntland a Gaalkacyo ka wado. – Radio Daljir
Agoosto 20, 2015 4:34 b 0
Gaalkacyo, August, 20, 2015 – Xildhibaan Maxamed Cabdi Warsame oo ka mid ah Baarlamaanka Puntland oo hadda ku suagan Gobolka Mudug xubinna ka ahaa guddigii dhawaan madaxwaynaha Puntland u magacaabay ka shaqaynta bilicda iyo naqshadaynta magaalada Gaalkacyo ayaa Daljir uga waramay kormeero kale duwan oo ay ku tageen xaafadaha iyo goobaha ganacsi ee magaalada Gaalkacyo.
“Xaqiiqdu waxay tahay in dadwaynaha Gaalkacyo ay aad usoo dhaweeyeen qorshaha dawladda, amarada dawladda kasoo baxayna waxaa ka mid ah in qof kasta oo muwaadin ganacsade ah ladajiyo goobihii horay loogu talagalay, dawladdu waxaysan raali ka ahay in dadku ay kusoo yaacaan hareeraha laamiga, arrintaasina waa wax aanan habboonayn dhan kasta” Sidaasi waxaa yiri Xildhibaan Weeroow.
Xildhibaan Maxamed Weereerow waxaa uu been abuur ku tilmaamay in jiritaanka dhalinyaro hubaysan oo ka timid qorshaha dawladda, waxaana uu sheegay dadka inta caqliga saaxiibka u ah oo dhan ay si wayn usoo dhaweeyeen qorshaha lagu hormarinayo magaalada Gaalkacyo.
Halkaan hoose ka dhagayso waraysi uu Xildhibaanka la yeeshay C/xakiin Xuseen Xassan
(Dhagayso) Warfidiyeennada Gobolka Bari oo ka cabanaya tacadiga ka dhan ah shaqadooda.